Xanshashaq: Sidee dadku wax u xadaa? – W/Q: Xasan C. Madar | Somalilandpost
Xanshashaq: Sidee dadku wax u xadaa? – W/Q: Xasan C. Madar
“Ma waxad u malaynaysaa in qufulku gurigaaga ka difaaco tuugta? Kama ilaaliyo, wuxuse ka ilaaliyaa in dadka caadiga ahi ku xadaan?” Sidaa waxa yidhi nin ka mid ah ragga fura albaabada furayaashu ka lumaan oo la hadlayey nin uu albaab u soo furayey.
Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal, isaga oo madaxweyne ah waxa uu arrintaa ka yidhi,